LAPHA Nord 3202 v1 FSX - Rikoooo
I-Nord 3202 v1 FSX
Usayizi 22.82 MB
Play 7 353
Umbhali: Andre Chancel (Restauravia.com)
Ukuze FSX ukuhluka okuhambisanayo Chofoza lapha
I Nord 3202 uvezwa ukucupha ezimbili: "solo" ukumisa omunye umshayeli, "control ombaxambili" (DC) ukumisa, ie nabashayeli bezindiza ababili on ebhodini. Lokhu model okuzoqondiswa esihlalweni ezingemuva. okufushane umnyuziki english (nge auto-isifaki) ingatholakala lapha: http://restauravia.com/page5.html
I Nord 3202 eyodwa-engine monoplane izindiza, okuhloswe ukuba abashayeli imfundo. Akhiwa by Nord-Aviation (a manufacturor French), sibonelo wenza indiza yayo yokuqala kwi 1957 Ephreli 17. Ekuqaleni ifakwe 240 HP Potez 4D32 injini kanye-izindwani ezimbili Ratier bendiza, yayibizwa kwashintshwa kwafakwa 260 HP turbocharged Potez 34B kanye-izindwani ezintathu Hartzell bendiza. izinhlelo Its uphethiloli kanye Lubrication ivumela ukusebenza nazo zonke izikhundla. Ezinye aircrafts abangu modified version-isihlalo olulodwa nge ezikhanyisa kokwehla gear ukuze sithenge Nord 3202 yokuncintisana aerobatics ukufaneleka.
siklanyelwe ikakhulu ukuhlangabezana Amathuluzi (French Army) izidingo, 102 Amayunithi Nord 3202 zenziwa.
Labelwa Amathuluzi izikole aeronautical of Sidi Bel Abbès (North Africa), Le Luc en
Provence ke Dax (South ofFrance), i-Nord 3202 aye aqeqesha amaqembu isikhathi esingaphezulu 100000 indiza amahora abafundi eziningi bezindiza, French nasemazweni aphesheya.
Wing span: 9,50 m
Ubude: 8,14 m
Ukuphakama: 2,84 m
Wing ndawo: 16,26 m²
Airframe: metal nendwangu zikleliswe
Wing profil: NACA 23017 socwaningo ukuze NACA 23012
Enezinto: enezinto slotted
Gear: silungise nge ukumiswa hydropneumatic nesondo nomsila
isilinganiso Fineness: 5,5
isisindo Empty: 875 kg (radio ikhampasi version)
isisindo Maximum: kg 1220
Motorization Potez: 4D34B 260 HP-izindwani ezintathu bendiza
ngesivinini esiphezulu: 350 km / h
Isivinini Cruise: 190 km / h
Ceiling: 3000 m
Ukukhuthazela 4h 30
(5ource: imibhalo English kusuka restauravia.com)
Gmax imodeli André Chancel ne esivivaneni ofGilles Faulmeyer (injini kanye bendiza)
2D panel kanye Izikali Jean-Michel Renaux
izilungiselelo Ground kanye nezivivinyo ezindizayo Benoit Dube
Ukucolisakala Jean-Michel Renaux (N ° 15 - 71 - 78) Gilles Faulmeyer (N ° 64)
I-Fiat Aviazione Fiat G.12 FSX & P3D 2.0
I-IRIS P-40 Warhawk - The Testiments FSX & P3D
I-Simhangar RWD-14b FSX & P3D
UMartin B-26B-C Marauder FSX & P3D 1.1